”Waxaan hadda ogolahay xiriir wanaagsan!” – MW Faransiiska oo soo dabcey kaddib markii ay Turkigu ”cuqdadloow” ku tilmaameen | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Waxaan hadda ogolahay xiriir wanaagsan!” – MW Faransiiska oo soo dabcey kaddib...
”Waxaan hadda ogolahay xiriir wanaagsan!” – MW Faransiiska oo soo dabcey kaddib markii ay Turkigu ”cuqdadloow” ku tilmaameen
(Corsica) 10 Sebt 2020 – “Ma nihin dabaalllo balse waxaan doonaynaa in aanu soo celinno niyad wanaaggii aannu kula macaamilayney Turkiga,” ayuu yiri MW Faransiiska Emmanuel Macron oo la hadlay Reuters.
“Waxaannu doonaynaa in aan soo celinno xiriirkii caadiga ahaa ee aanu la lahayn Turkiga, si loo joojiyo tillaabooyinka gaarka ah ee la qaadayo,” ayuu daba dhigay Macron oo ka hadlayey shir uu 7 dal oo kulaala Badda Dhexe, balse uu Turkigu ka maqan yahay, ugu qabtay Corsica.
Isla maanta gelinkii hore, Turkiga ayaa furka ku xooray Faransiiska oo ay ku eedeeyeen inay bartilmaameedsanayaan dalkooda iyo MW Recep Tayyip Erdoğan, kaddib war kasoo baxay WAD Turkiga oo Macron ku tilmaantay nin ”kibraani ah” oo cayrsanaya ajende gumaysi oo daxalaystey.
“Warka Macron wuxuu muujinayaa karti xumadiisa iyo quustiisa. Macron oo aannu ka dhabjinay siyaasad uu ka wadey daaha gadaashiisa, wuxuu maalin kasta weerarayaa Turkiga isagoo xambaarsan dareen cuqdadaysan,” ayay daba dhigtay Wasaaradda A. Dibedda Turkiga oo sheegtay in Macron uu halis gelinayo danaha Midowga Yurub isagoo dhex gashanaya middiisa “gaarka ah iyo mawaaqifta qarankiisa.”
Macron oo MY ugu baaqay inay moowqif midaysan ka qaataan wax uu ku sheegay ”hab-dhaqanka aan la aqbali karin” ee Turkiga ayaa si cad ula safan Giriigga oo diiddan shidaalka uu Turkigu ka baarayo xeebiiisa, isagoo qaarna ku sadaqaystay qaarna ka iibiyey diyaaradaha Rafale wax lagu sheegay isbahaysi ka dhexeeya Paris iyo Athens oo lid Turki ah.
Previous articleJaamacadda Carabta oo bahdishey Falastiiniyiinta & saxaafadda Israel oo ku diganaysa (Maxaa dhacay?)
Next article”Cid dadaal la’aan ku dhacdayba, ardaygaasi wuu dadaalay waana dhacay!”